Produce ee chips ASIC ka Samsung - Blockchain News
Samsung bilaabeen saara chips ASIC for macdanta ee cryptocurrency
tartan ugu weyn ee shirkadda ee suuqa this kasbada on qalabka macdanta in ay ku $ 400 million ee quarter a.
South Korean Samsung ayaa ku hawlan wax soo saarka ee chips ASIC, kuwaasi oo loo isticmaalo wax soo saarka ee bitcoins, ethers iyo cryptocurrencies kale. Waxaa loo qoray by TechCrunch iyadoo la tixraacayo wakiilka shirkadda.
Samsung waa chips saarka hadda mashquul thecryptocurrency. Si kastaba ha ahaatee, we can not give more details about our customers. – Samsung PressOffice
The ugu horeysay oo ku saabsan shaqada ee Samsung badan chips ee macdan qodayaasha waxaa loo sheegay warbaahinta Korean. Sida laga soo xigtay edition maxalliga ah Bell ayaa, wax soo saarka mass of chips ASIC in warshad Semiconductor Samsung bilaabeen in January 2018. Ilaha ayaa sheegaya in shirkad uu mar hore ku heshiiyeen on sahayda qalabka macdanta for shirkad la magacaabin ka soo Shiinaha.
Wakiilka of Samsung ayaa diiday inuu la TechCrunch wada hadlaan faahfaahinta shaqada on chips ASIC ah.
daabacaadda baaqaday in Samsung ay leedahay in la TSMC microchip Taiwan saaraha tartamaan, oo kasbada on qalabka macdanta ka $ 350 million si ay u $ 400 milyan saddexdii bilood ee ugu. Shirkadda waxay u adeegtaa qeybiyeyaasha sida weyn ee qalabka macdanta sida Bitmain iyo Kancaan Creative.
Ka dib markii natiijada 2017, Samsung noqday saaraha ugu weyn chip, barakiciyay ka jagada hogaamiyaha Intel. ganacsi Samsung ee wax soo saarka microchip in 2017 ahaa $ 69 bilyan marka loo eego Intel ee $ 62.8 billion.
Hanta bilaabay NYSE ...
ra Lagaga Seeraar ...
Post Previous:Sida loo sameeyo ICO ah ee Switzerland